Somaliland: Cabdiweli Gaas Iyo Ku Xigeenkiisa Cabdixakiim Camay Oo Faraha Iskula Tagay Dagaal Gacan Ka Hadal Ah, Midka Gacanta Ku Horeeyey Iyo Waxa Ay Isku Hayaan Labada Nin! - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Cabdiweli Gaas Iyo Ku Xigeenkiisa Cabdixakiim Camay Oo Faraha Iskula Tagay...
Wararkii ugu dambeeyey ee laga helayo Maamul Goboleedka Soomaaliya ee Puntland ayaa sheegaya in Madaxweynaha Is-maamulkaasi iyo Madaxweyne ku xigeenkiisu ay siku af dhaafeen qaasriga Magaalada Garoowe halkaaasina uu ku dhex maray gacan ka hadal koobani.
Xogo gaar ah oo ay heleen qaar ka mid ah warbaahinta dalkaasi Soomaaliya ayaa sheegaysa in madaxweynaha Maamulaasi Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Ku Xigeenkiisa Cabdixakiin Cabdullahi Xaaji Cumar Camey ay isku gacan qaadeen gudaha madaxtooyada maamulkaasi ku leeyahay Garoowe.
Arrintan oo shalay ahayd midda loogu hadal haynta badnaa Magaalada Garowe iyo guud ahaan deegaanada Puntland, ayaa ku soo beegmaysa xilli labada mas’uul ay aad ugu kala fogaadeen shirkii Kismaayo oo ay dowlad goboleedyadu wadashaqeyntii dowladda dhexe ugu hakiyeen.
Ilo ka ag dhaw xafiiska madaxweyne ku xigeenka Puntland oo la soo xidhiidhay qaar ka mid ah warbaahinta Soomaaliya oo Wargeyska Foore soo xiganayo ayaa sheegay in labada mas’uul ay isku maan dhaafeen xafiiska madaxweynaha, xilli Gaas uu su’aalo ka weydiiyey ku xigeenkiisa lacago uu kala baxay Bankiga markii uu bishii hore safarka ku tagay magaalada Muqdisho.
Hase ahaatee, Camey oo ka jawaabaya lacagta lagu eedeeyey ee uu kala baxay Bankiga dhexe ee Puntland ayuu ugu jawaabay “Yaa ku xisaabiya adiga?”, Isla markiiba waxaa ka xumaaday hadalkii labadooda waxa ayna is dhaafsadeen hadallo kul kul oo keetay in Camey istaago gacanna ula tago Cabdiweli Gaas halkaasina uu ka dhaco gacan ka hadal kooban iyada oo isla markiiba ay labadan masuul ku kala guntadeen ciidamada ilaalada Madaxtooyada Garoowe.
Waxaa labada mas’uul soo kala dhex-galay dadkii goobta ku sugnaa, oo u badnaa shaqaalahooda gaar ahaan ciidanka ilaalada.
Lacagta badan ee uu Cabdiweli Gaas ku eedeeyey in Cabdixakiim Camey kala baxay Bangiga dhexe ee Puntland waxa ay imaneysaa xilli uu Madaxweyne ku xigeenka Cabdixakiim Camey muddo ku sugnaa Muqdisho, isaga oo markii uu ka soo laabtay shir jaaa’id oo uu Garowe ku qabtay ku sheegay in uu Caasimadda Soomaaliya u tagay arrimo caafimaad iyo dhul uu ku lahaa magaaladaasi.
Dhinaca kale, Camey waxa uu ka soo horjeestay mawqifka Madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu ka qaatay ee uu xidhiidhka ugu jaray dawladda Dhexe ee dalkaasi Soomaaliya taasi oo uu kala sinaa Madaxdii Maamul Goboleedyada ee Kismaayo ku shirtay wiiggan, waxaana aad baraha bulshada ugu baahay sawir ay isku salaamayaan garoonka diyaaradaha ee Garowe, balse muujinaya heerka uu khilaafkoodu gaadhsiisan yahay.
Cabdixakiim Camey ayaa la rumeysan yahay inuu aad ugu dhow yahay dowladda federaalka ee uu horjoogo Maxmaed Cabdilaahi Farmaajo, hase yeeshee Cabdiweli Gaas Ayaan waxba ka qaban karin, xilkana ka qaadi karin maadaama aanu xilka si rasmi ah uga qaadi Karin oo ay hal mar ku wada yimaaddeen doorashadii Baarlamanka Puntland u wada doortay waana sida uu dhigayo dastuurka Maamul Goboleedka Garoowe.
Khilaafkooda ayaa sidoo kale salka ku haya kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya IN Jamhuuriyadda Somaliland iyo Maamul Goboleedka Puntland kala saxeexdeen heshiis ay dhexdhexaadin kaga jiraan beesha Caalamka iyo gaar ahaan urur goboleedka IGAD kaasi oo dhigaya in ciidamada labada dhinac kala joogaan halka ay wakhtigan ku sugan yihiin sidaana colaadda lagu joojiyo arrinkaasi oo Camayga Madaxweyne ku xigeenka ahi u arko guul darro Puntland soo gaadhay iyo sidoo kale qorshahoodii hore ee ahaa in dagaalkaasi ay ku gaadhaan dano siyaasadeed oo ay kursiga ku dheeraystaan taasi oo Cabdiweli la sheegay in uu qaatay nabadda.